Enugu Lifestyle And Golf City - NDỊ IGBO KWENU
Home / Ụwa / Ala Igbo / Enugu Lifestyle And Golf City
ndiigbokwenu1 June 22, 2016	Ala Igbo, Featured Comments Off on Enugu Lifestyle And Golf City 1,070 Views
Aṅụrị juru ọtụtụ ndị Enugwu Steeti obi otu ndị ọchịchị ha si emepe ngalaba nile dị n’Enuguu Steeti. Otu n’ime ọtụtụ ọrụ a ga eji n’echeta onye ikpeazu chịrị Enugwu Steeti, Gọvanọ Sulivan Chime Iheanacho, bụ Enugwu Lifestyle and Golf City.
Enugu Lifestyle and Golf city bụ otu Esteeti pụrụ iche. Ọ ga-abụ otu n’ime Esteeti kacha mma n’ime Afrika. N’oge gara-aga ọtụtụ ndị gọvanọ chịrị n’Ala Igbo adịghị achọ ịrụchapụ ọrụ ndị ha si n’aka ha nara ọchịchị bidoro. Mana ọ dị ka njedebe ụdịrị omumeahu eruola n’ihi na onye n’achị Enugwu Steeti kita, Gọvanọ Ifeanyi Ugwuanyi akwurugo chim, sị na ọ ga-akwado ma rụchapụ ọtụtụ ọrụ Gọvanọ Sulivan Chime bidoro n’Enugwu steeti.
Enugu Lifestyle and Golf City bụ ofu ọrụ nwere nkwado ndị ochịchị Enugwu steeti. Ha n’eme nkea iji hụ na ha mepere Enugwu Steeti ka ọ bụrụ ebe ndị igbo ga eji n’eme ọnụ. Ọ ga-enwe ụlọ-akwụkwọ, ụlọ-ọgwụ, ahịa, ebe egwuregwu, mmiri dị ọcha, ọkụ electric na helipad.
Enugu Lifestyle and Golf city abụghị ụdịrị ọrụ anyị na-ahụbende n’akwụkwọ akụkọ. Mgbe anyị n’ede akụkọ-a, ha n’edozi ụzọ ndị mmadụ ji abata n’ime ọmalịcha Esteeti-a. Ha n’etinye ọkụ ga-adị n’ụzọ na osisi fulawa ga-eme ka ọ maa mma.
E dozicha nnukwu ụzọ-a e si abanye n’ime Esteeti-a ọ ga-enwe ụlọ ebe ndị iwu-oji ga-anọ n’eche ndị mmadụ.
Obụrụ na ị bata Enugu Lifestyle and Golf city ofu ihe ị ga-ahụ g’egosi gị na ihe na-aga n’iru bụ ụlọ nchebe na nlekọta anya a rụgoro. N’ime ụlọ-a ka a nwere ọkwa ndị n’eresi ndị mmadụ ụlọ na ala, ọkwa ndị n’eduyeri ndị ọbia chọrọ ịhụ ihe dị iche-iche n’ime Esteeti-a, na ọkwa ndị n’elekọta ndị n’arụ ọrụ n’ime Estate a anya.
Ọbụrụ na ị hapụ ụlọ nchebe na nlekọta anya bawazie n’ime, ị ga-ahụ na ha arụchawago ụlọ-mmiri ga enye ndị nile g’ebi n’ime Esteeti-a mmiri dị ọcha. Ọ bụzi ihe dị ihie ma dịrị kwa ebe onye ọbụla chọrọ ịhụ ya anya nwere ike ịga hụ ya.
Ha n’atụ anya na ọkụ-elektrik ndị g’ebi n’ime Esteeti-a ga-eri bụ 72,000KvA. Mana iji hụ na onweghị ihe ga emekata mee ka okụ harị ịdị n’ime Esteeti-a, ha etinyego ngwá ọrụ nwere ike ịnabata 15MvA (150,000KvA) 33/11Kv n’ime Esteeti-a. Nwa-ọbere ihe họrọ ka ha rụchaa ngwá ọrụ elektrik-a.
Otu nwoke bịara ịzụ Ala na Enugu Lifestyle and Golf City, Mazi Ekene Nzube kwuru sị “ịgwa unu eziokwu, ihe m hụrụ ebe-a taa n’enyem ọṅụ. ụdịrị ọrụ ndị-a rụgoro ebe-a amaka. Anam ekele Gọvanọ Ifeanyi Ugwuanyi na Gọvanọ Sulivan Chime onye bidoro ọrụ ọma-a. O doro m anya na Esteeti-a ga-abụ otu n’ime Esteeti ga-akacha mma na Afrika. Ka anyi tinye ego rụpụta ya ka ọ maa mma, ka ọ bụrụ ebe ụmụigbo nwere ike ịlaghachite bịa zuo ike. Ebim na Kansas na U.S.A, ebeahu ka m si bịa. M ga-agwa gị na oteela aka ụmụigbo bi na mba ọzọ n’achọ ebe anyị nwere ike ịlaghachite bịa biri n’Ala igbo, ebe ha nwere ike ibi n’udo n’enweghị onye ga n’eyi ha egwu”.
Mgbe anyị juru ya kedu okwu ọ nwere ịgwa ndị igbo gbasara ọnọdụ Ala-igbo, O kwuru sị
“Ihe adịchaghị nma n’Ala-igbo, mana ihe m hụrụ ebea gosiri m na ụmụigbo emepewago anya, ụmụigbo n’achọpụtazi na n’ime Naijiria taa, ọnweghị ebe g’enye anyị ihe anyị chọrọ karịa Ala-igbo. Enugu Lifestyle and Golf City gosiri m na Dike ekulewo n’ụra. . Anam akpọkwute ndị igbo ibem ebeọbụla ha nọ ka anyị tinye nu aka kwalite ọrụ ọma-a ha n’arụ n’Enugwu steeti. Ọ ga-adị nma ma anyị tinye ego ruo ụdịrị ihe-a na Igbo Steeti nile. Doo nu kpọsaa nu ozi-a, ka ndị igbo nyụkọọ mamiri ọnụ ka ọ gbaa ufufu.”
Ọbụrụ na ị chọrọ ịchọpụta maka Enugu Lifestyle and Golf city, gaa na http://www.enugulifestyleandgolfcity.com
Enugu Lifestyle and Golf City Enugwu Steeti Govano Ifeanyi Ugwuanyi	2016-06-22
Tags Enugu Lifestyle and Golf City Enugwu Steeti Govano Ifeanyi Ugwuanyi
Previous Ọbụghị iwu: Igbo ndị ọma nụrụ olu m.
Next Onye chi n’eche na echekwa onwe ya